Facebook Page မှ စီးပွားရေး အမြတ်အစွန်းထွက်အောင် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ...
မြန်မာပြည်သူ ဆယ်သန်းကျော် Facebook ပွတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ ခေတ်အခါမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းလိုလို Facebook Page တွေရှိနေကြပါပြီ။ အားလုံးအကြားမှာ ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် သာမန်ရွက်ကြမ်းရေကျို နည်းဗျူဟာမျိုးနဲ့ မရလောက်တော့ပါဘူး။ Facebook ကို နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ စနစ်တကျသာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook Page ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက်ဆယ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Zappos ၏ အောင်မြင်ရေး နည်းဗျူဟာ
Zappos ဟာ Digital ရဲ့ စွမ်းပကားကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး အသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Digital Marketing က လူသားတွေအကြား ဆက်နွယ်မှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ကြောင်း နားလည်ပြီး Brand ကို ကမ္ဘာအနှံ့ လူတန်းစားမရွေး ထိတွေ့နိုင်တဲ့ Digital နည်းလမ်းနဲ့ ထိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ရေ...တစ်ပတ်လုံး အလုပ်တွေ ရှုပ်၊ စိတ်တွေ ဖိစီးပြီး ကိုယ်ထောင်း စိတ်ပိန် ဖြစ်နေပြီလား။ လာမယ့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေအတွက်ရော ဘယ်လို planမျိုး ချထားပြီးပြီလဲ...။
What is Social Media Marketing ???
ဒီနေ့ မြန်မာလူဦးရေ ဆယ်သန်းကျော်ဟာ Social Media အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ မိတ်ဆွေရဲ့ လုပ်ငန်းကို Social Media မှာ ချဲ့ထွင်ဖို့ အသင့်ပဲဆိုရင် Click နှိပ်ကြည့်လို့ ရပါပြီ။
29 November 2015 - 1
Hey!!! Here are the best ways to promote your Travel Website, Just click and pay attention only for about 10 minutes. We describe the most effective ways for your business...